Sethula kuwe entsha futhi olusha American Truck Simulator Key Generator ....
Virtual DJ (Ukwengeza esibizwa VDJ) kuyinto uhla audio / video ukuxuba isicelo software zokuhlola ezasungulwa Atomix Product ...
Thwebula Age yakamuva baziphatha umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho ....
Posted in Izindaba	2015-06-24
With kuka 10 iminyaka amagugu kanye lozalo nokwenza ezinye kakhulu sikhumbuleke futhi siphumelele racing franchises emhlabeni - ezifana GTR, Need For Speed, futhi Test Drive - Kancane Mad Studios waphinda waphayona futhi ukuqamba in 2015 by umkhankaso ngelihlo-akukhuthazwa futhi ethengiswa kakhulu kunazo Project CARS; umdlalo ngokupheleleyo uxhaso futhi wadala by umphakathi oshisekayo racing abalandeli evela emhlabeni wonke.
Amashumi ezinkulungwane abadlali ukuhlola umdlalo, enikeza impendulo kuso, nokwakha izimpahla ngoba lonke ukuthuthukiswa, CARS Project iye yabizwa ngokuthi nathi weqiniso ukuba izinsolo uzizwe kuyiphi imithombo eside imisiwe, futhi njengoba umholi emakethe in ukwethembeka ezibukwayo kanye nobuchwepheshe technical.
With an isimiso esikhona on Demand okuqukethwe sekuqaliwe kakade ukuqhubeka silungiselela Project CARS izici ezintsha fresh, updates, futhi izinto ezinkulu ukudlala unyaka wonke, Kancane Mad Studios uyasuka yayo ikusasa isimemezelo ukuqhubeka franchise nge Project CARS 2. Futhi waphinda, enye inkondlo elama izokwakhiwa, ihlolwe, futhi ekugcineni oyamukelayo - gamers – ngokusebenzisa WMD Portal yesikhulumi isixuku ngemali.
Studios Kancane Mad uye empeleni umemezele ukuthi Project CARS 2 uhlala imisebenzi nokuthi uqamba isixuku-nokuxhasa umdlalo ividiyo obalelwa of $ 7 million. Lokho mayelana esishukumisela umuntu ukuba $11 million. Lo mdlalo okufanele kuhlelwe ukuba ufika Xbox One, PS4 futhi PC.The sitatimende siza ngenxa Studios kancane Mad, posted phezu esizeni yabo esemthethweni. Futhi uma sicaphuna kubo izwi nezwi, nakhu uqamba echazayo mayelana nomsebenzi omusha …
Kancane Mad Studios is eqinisekisa konke brand-new racing professional izifunda, selula 50 izindawo ezahlukene nge ngaphezu 200 race izifundo. Akhiwe kuhloswe ukuba baphakamise eyenziwe Motorsports isigaba nge 8 brand-new racing eyala ehlanganisa Rallycross, hill ekhuphuka kanye Touge. Bazophuma ahlanganisa okungaphezu 200 izimoto ehlukahlukene kusukela 40 amakilasi imoto ezahlukene, ehlanganisa kokubili izimoto isimiso nqatshelwe namadivayisi racing.
Futhi Bazophuma ukwenza into ngokuphelele esisha mode career by ehlanganisa i yonke brand-new co-op umsebenzi. Now, kungakhathaliseki ukuthi yini oyikholelwayo Studios mayelana kancane Mad, umcabango wokuba umsebenzi wesibili Gamer njengenhlangano on-track group umlingani, noma i in-imoto co-pilot empeleni cool. Ukuze rally izinhlanga umdlali 2nd ingasebenza njengendlela spotter, okungase kube othakazelisayo ngempela. Akhiwe futhi kubandakanya drive eguqulayo for ukukhuthazela izinhlanga.
Abadlali Ngokufanayo emuva phezu kwetafula abashayeli AI-elawulwa esikhundleni izenzakalo lapho gamers woza dlala iDemo, noma ungakwazi empeleni abadlali hop phakathi yokudlala yakho isipiliyoni ukuthatha for the abashayeli AI-elawulwa. Yeka Lihle wukuthi? Umqondo ukwenza element online bushelelezi esele umdlalo.
Izindaba babamba lokunengi abantu off abaqaphi waphakamisa eziningi imibuzo. For into, CARS Project neze nje baphuma kokuxoshwa for the PC, PS4 and Xbox One. Wii U abanikazi asalindele umdlalo eziningi zazo basiza fund okokuqala ezungeze.
Futhi, ividiyo game sika $ 7 million ecela izinga ngempela eliphezulu futhi gamers namanje lokuzama ukucwila amazinyo abo angena wokuqala video game.
Angikholwa izinga ecela alilungile futhi ngiyakujabulela lokho imisebenzi emisha shá bethanda ukuthuthukisa umdlalo, Nokho kungcono indlela ngaphambi kwesikhathi.
Wii U abanikazi basaqhubeka ngokuzizwa eshile Ungathi efakwa ubuso kubo ukuqala ekubhekaneni enye inkondlo elama lapho kuqala video game engazange enikeziwe okwamanje. Ngaphezu kwalokhu, CARS Project 2 Cishe ubungacabanga sibukeze indlela bushelelezi on the front isixuku ngemali uma zanikeza lapho ebona ukuthi wekucala Project CARS umdlalo isekelwa futhi kwanelise ngokuphelele for iningi abadlali on the ezisekelweni okuqinisekisiwe ngaphambi kokuzama ukucela imali for the landela up.
Nokho, uma ufisa ukwengeza imbangela ungenza kanjalo ngokukhokha libone ukuthi indawo esemthethweni.
Tags: game world, imidlalo new, racing game, game oluzayo